Otu esi etinye PHP 8.0 na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye PHP 8.0 na Rocky Linux 8
October 30, 2021 July 25, 2021 by Jọshụa James
Wụnye ebe nchekwa PHP 8.0 Remi
Kwado ebe nchekwa PHP 8.0 (Remi).
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye PHP 8.0 na Rocky Linux 8.
Ngwungwu achọrọ: ebe nchekwa
Ugbu a, PHP 8.0 adịghị egosipụta na Rocky Linux's AppStream, ebe ọ bụ na ọ ka dị ọhụrụ ma na-edozibeghị agbụ ahụ na ebe nchekwa Rhel. Agbanyeghị, ịnwere ike ịwụnye PHP site na ebe nchekwa (Remi), ebe nchekwa nke ndị ọzọ na-ebuga PHP 8.0 kacha ọhụrụ yana gụnyere PHP 8.1 na-abata.
Ọrụ mbụ bụ ịwụnye ihe (EPEL) ebe nchekwa, nke na-anọchi anya (Ngwunye mgbakwunye maka Linux Enterprise). Maka ndị ọrụ ọhụrụ na Rhel na Rocky Linux, EPEL nwere ngwugwu ngwanrọ a na-ejikarị maka Linux Enterprise.
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" ka gaba n'ihu na mbubata igodo GPG na imecha nrụnye.
Mara, ị ga-abịa ngwa ngwa x2 ọtụtụ ugboro iji pịnye "Y" ibubata igodo GPG ọzọ. Nke a dị mma ime.
PHP 7.2 bụ nhọrọ PHP ndabara maka nrụnye ọkọlọtọ na Rhel/Rocky Linux yana ebe nchekwa Remi. Ndụmọdụ dị ngwa bụ iji (depụta php) iwu ịhụ nhọrọ dị na ndabara. Iwu a nwere ike ime nke a:
Dịka ị nwere ike ịhụ n'elu, na (d) mkpado dị n'akụkụ PHP 7.2, nke ị ga-achọ ịtọgharịa ma gbanwee iji wụnye PHP 8.0 na Rocky Linux.
Ịtọgharịa ndepụta PHP dị mfe site na iwu a:
Ugbu a ị gbakwunyela ebe nchekwa PHP Remi wee mee ka PHP 8.0 bụrụ ụdị ndabara na sistemụ Rocky Linux gị, ị nwere ike iwunye PHP 8.0 site na iwu a:
Mara, wepụ nhọrọ ndị ị na-achọghị nke a bụ nhọrọ. Maka ntuziaka ahụ, anyị rụnyere nza niile dịka n'okpuru:
Ihe atụ n'okpuru, cheta na nke a ga-agbanwe n'oge:
N'ime nkuzi a, ị mụtala banyere nke (EPEL) ebe nchekwa na (Remi) ebe nchekwa na otu esi etinye ha na sistemụ Rocky Linux gị, yana ịwụnye PHP 8.0 site na ebe nchekwa ndị ahụ. N'ozuzu, PHP 8.0 na-amalite ugbu a ịghọ ọkọlọtọ mara mma n'ebe niile. Site na mmepe nke PHP 8.1 na-abịa, ndị mmepe na-emezi ngwa weebụ ha PHP 8 enyi na enyi, gụnyere nnukwu CMS WordPress nwere isiokwu ndị ọzọ na ngwa mgbakwunye devs iji nweta PHP 8.0 akwadoro nyere uru 8 nwere na nchekwa na ọsọ tụnyere 7. usoro.
Agbanyeghị, naanị ị ga-etinye PHP 8.0 ma ọ bụrụ na ịmara na ngwanrọ gị na-akwado ya, n'ihi na ọ ga-ebute nsogbu na ngwa gị, yabụ gbaa mbọ lelee. Ọ bụrụ na ị maara ka esi etinye Rocky Linux 8, lelee ntuziaka anyị maka ịwụnye Nkume Linux 8.
Categories Nkume linux Tags PHP, Nkume linux Mail igodo
Otu esi etinye ma jiri Maldet na Ubuntu 20.04